Convertible Crossover ကား တစ်စီး ကို ဖန်တီးဖို့ ရှိနေတဲ့ Fiat ! – MyMedia Myanmar
Convertible Crossover ကား တစ်စီး ကို ဖန်တီးဖို့ ရှိနေတဲ့ Fiat !
Crossover ကားလောကတော့ ဘယ်တော့မှပြိုင်ဆိုင်မှု ရပ်တန့်သွားမယ့် အနေအထားမှာ မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ Crossovers တွေ ဆိုတာဟာ အမေရိက ဈေးကွက်မှာလည်း လူကြိုက်များ ပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် အခု အချိန်မှာတော့ လျော့နည်းကျဆင်းလာခဲ့တဲ့ ကား အရောင်းပိုင်းတွေကြောင့် တော့ အနည်းငယ် ရုန်းကန် လာရနိုင်ပါတယ်။ အထူး သဖြင့် နာမည်ကြီး ကားကုမ္ပဏီ GM ဘက်ကလည်း အမေရိက ဈေးကွက် ထဲက Lineup ကို လျှော့ချ ဖို့ ရှိလာ ခဲ့သ လို Ford ကိုလည်း ကား ဈေးကွက် ထဲက လျော့နည်း သွားစေခဲ့ပြီး Ford Mustang ကားတွေကိုတော့ ကယ်တင် ထားနိုင် ခဲ့သေးတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Fiat Chrysler Automobiles အပိုင်းကို ကြည်မယ့် ဆိုရင် တော့ The Dodge Charger ၊ Dodge Challenger နဲ့ Chrysler 300 တို့ ဟာ သက်တမ်းအားဖြင့် အတော်လေး ကို ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သလို Alfa Romeo Giulia ဆိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်း Fiat အနေနဲ့ က‌ တော့ သူတို့ရဲ့ မြောက် အမေရိက Lineup ထဲက အချို့သော ကားတွေကိုဆက်လက် မထုတ် လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကားတွေထဲမှာ အကြမ်းဖျဉ်း အားဖြင့်တော့ Fiat 500 ၊ 500e နဲ့ 500 Abarth တို့လည်း ပါဝင် လာနိုင်သေးပြီး 500 L နဲ့ 124 Spider တို့လည်း အဆိုပါ စာရင်းထဲ ရောက်လာ နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ နာမည်ရ စာရင်းထဲမှာ ကျန်ရှိလာနိုင်‌တာကတော့ Fiat ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး Crossover-Style Derivative ဖြစ်တဲ့ 500 X ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင် စားစရာကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က အဲ့ဒီလို ကားမျိုး ကိုမှ အမိုးဖွင့်ပုံစံ Top Down အတွေ့အကြုံကို ရရှိလာမယ် ဆိုရင်ရော လိုချင်တဲ့ သူရှိကြမလား ဆိုတာပါပဲ။ ဟုတ် ပါတယ် အဆိုပါ ပုံစံ နဲ့ ကားအသစ် တစ်စီး ဖြစ်လာမယ့် Rag Top Fiat 500 X Cabrio Model ကို ထုတ်လုပ်လာ နိုင်တယ်လို့ သိထားရပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ ယာဉ်အစိတ် အပိုင်း ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အခုလို သတင်းရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Automotive News Europe ရဲ့ ဖော်ပြချက် အရတော့ Model အသစ် ဟာ ယခုနှစ် နောင်းပိုင်းလောက်မှာတင် ရောက်ရှိ လာနိုင်တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။ အခြား သော သတင်း ရင်း မြစ်တွေ အရလည်း အဆိုပါ ကားအသစ်ဟာ 500 C နဲ့ တူညီ လာနိုင်တယ် လို့ သိထား ရပြီး Door Frames တွေ ကတော့ အပြည့် ပါဝင်လာနိုင်ကာ အလယ်တည့်တည့် အမိုးကတော့ Canvas အသွင် ရှိနေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲက အခြား သော Convertible ကားတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ အခြားသော ကားတွေဟာ Frameless Doors တွေကိုပဲ တပ်ဆင်လေ့ရှိတာ ဖြစ်ပြီး တကယ့်ကို အမိုးပွင့် ဖြစ်တဲ့ Cabin ရဲ့ အပေါ်မှာ အလို အလျောက် အဖွင့်အပိတ် လုပ်နေမယ့် သဘောလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကားလောကထဲမှာတော့ Convertible Crossover တွေ အနေနဲ့ အရေအတွက် အနည်းငယ် လောက်ပဲ ထုတ်လုပ် ရောင်းချ နေတယ်လို့ သိထားရကာ အဆို ပါ အမျိုးအစား တွေထဲမှာ မှ Nissan ရဲ့ ပိုပြီး ကျော်ကြားတဲ့ Murano CrossCabriolet လည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါ့အပြင် အခြား အမျိုးအစားတွေ အဖြစ် Land Rover ရဲ့ Range Rover Evoque Convertible နဲ့ မကြာသေးမီ က မှ ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Volkswagen ရဲ့ T-Roc Cabriolet တို့လည်း ပါဝင် နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ T-Roc Cabriolet ကားကတော့ အခု ထွက်ရှိ လာမယ့် Fiat 500 X Cabrio ရဲ့ အရှေ့ဥရောပ ဈေးကွက် ထဲမှာ အဓိက ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိ မသေချာသေးတဲ့အချက် တစ်ချက်ကတော့ အဆိုပါ ကား အသစ် ကို အခြား သော ဈေးကွက်တွေ ထဲမှာလည်း ရောင်းချ လာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုပါပဲ။ အခြား တစ်ဖက်မှာ ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Stagnant Crossover လောကအသစ်ကို ပြောင်းလဲ ပေး လိုက်ရာ ရောက်သ‌လို ယခင် ၄ နှစ် လောက် အတွင်း အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်း ရောင်းချ ခဲ့သမျှ ထဲမှာ အသစ် ဆန်းဆုံးလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ တစ်ချိန်တည်းမှာ ပဲ Fiat Brand အပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စား မှုတွေ ပြန်လည် မြင့်တက် လာနိုင်သလို ဈေးကွက် အတွင်း ရုန်းကန် နေရမှု အတွက် အနည်းငယ် တော့ သက်သာ လာစေ နိုင်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်စဉ်းစား ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း 500 X ရဲ့ နဂို ကတည်းက ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ ရောင်းအား နှေးကွေး ကျဆင်းနေမှုကိုလည်း အကြောင်းပြချက် တစ်ရပ်အဖြစ် ဆက်လက်မြင်တွေ့ ရနိုင်သေးပေ မယ့် အခုမော်ဒယ် အသစ် မိတ်ဆက်တဲ့ အခါမှာတော့ အပြောင်းအလဲတစ်ရပ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
The post Convertible Crossover ကား တစ်စီး ကို ဖန်တီးဖို့ ရှိနေတဲ့ Fiat ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-11T14:00:31+06:30January 11th, 2021|MYCARS MYANMAR|